Saraakiil Katirsanaa illaalada Madaxtooyada Oo Ku Hoobtay Weeraradii Mataanaha ahaa Ee Al Shabaab Muqdisho Ka Fulisay.
Sunday February 25, 2018 - 11:50:24 in Wararka by Super Admin
Waxaa sii kordhay khasaaraha dhimasho iyo dhaawac ee ka dhashay weeraro Mantaana ahaa oo habeen hore ka dhacay madaxtooyada Villa Somalia iyo afaafka hore ee Xarunta Nabad sugidda magaalada Muqdisho.
Wakaaladda wararka Reuters ayaa sheegtay in khasaaraha ugu badan uu weerarada kasoo gaaray saraakiisha ciidanka ilaalada madaxweyne Farmaajo iyo lataliyaashiisa gaarka ah.
Tobanaan Meyd ayaa laga daad gureeyay hareeraha madaxtooyada halka agagaarka xarunta Hay'adda Nabad Sugidda iyana lagu arkay Meydad farabadan.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in hoggaanka Dowladda Federaalka ay isku eedeeyeen sababta looga hortagi waayay weerarada xilli dhammaan waddooyinka muhiimka ah ee caasimadda iyo Jid cadayaasha lagu gooyay dhagxaan waaweyn gaadiidka dadweynahana laga mamnuucay.
Goobta weeraradu ka dhaceen ayaa laheyd xasaasiyad gaar ah waxayna taasi ka dhigneed in amniyaatka Xarakada Al Shabaab ay ka dhax duseen dhammaan xeyndaabyadii adkaa ee dhanka ammaanka AMISOM iyo sirdoonka dowladda Federaalka.
Warar kale waxay sheegayaan in dadka weerarada ku go'ay ay kamid yihiin saraakiisha ilaalada gaarka ah ee R/wasaare Kheyre iyo sidoo kale saraakiil Nabad sugidda katirsan oo si KMG ah ugu howlgelayay Hoteelka Doorbin oo aan ka fogeyn dhismaha Habar Khadiijo.
Wasiirka Gaashaandhigga ayaa isna xaqiijiyay in sarkaa lagu magacaabo Bishaar oo katirsanaa ciidamada ilaalada madaxtooyada uu kamid ahaa dadkii ku dhintay weerarkii Villa Somalia, waxaa kale oo jira dad ubadnaa shaqaalaha dowladda oo lagu dilay isla weerarka madaxtooyada balse wali magacyadooda aan warbaahinta loosoo bandhigin.
Weeraradan ayaa wax badan ka bedelay hankii Farmaajo iyo saaxiibadiis ee ahaa in ay dagaalka ka fogeeyaan wadada laamiga ah ee Makka Al-mukarrama oo labadii bilood ay ku faanayeen in wax weeraro ah aysan ka dhicin oo la nabadeeyay.